जनकराज शाह | गृहपृष्ठ
Home सम्पादकीय जनकराज शाह
२०२० सालमा अछामको मङ्गलसेनमा जन्मिएका जनकराज शाह नेपाल व्यवस्थापन सङ्घ (म्यान)का अध्यक्ष हुन् । कृषि विकास बैङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत भइसकेका उनीसँग केही समय निजामती क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।
डा. बाबुराम भट्टराईको अर्थमन्त्री कालमा उनी बजेट निर्माण कार्य दलका सदस्य थिए । उनले नेपाल बैङ्कमा १४ वर्षसेवा गरिसकेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरबाट एमबीए गरेका शाहले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट ‘निजीकरण’मा विद्यावारिधि गर्दैछन् । ‘मानवअधिकार’ विषयमा स्वीडेनको लुण्ड विश्वविद्यालयबाट डिप्लोमा तालीमसमेत लिएका शाह जयपृथ्वीबहादुर सिंह प्रतिष्ठानका पूर्व महासचिव हुन् ।
सङ्क्रमणमा अल्झिएको राजनीतिक व्यवस्थापन
एक दशक लामो द्वन्द्वपछि मुलुक परिवर्तनको बाटोमा हिँडेको पनि धेरै समय बितिसकेको छ । मुलुकमा राजतन्त्रको अन्त्य भई सङ्घीय गणतन्त्रको स्थापना भइसक्दा पनि त्यसको अनुभूति नेपाली जनताले गर्न पाएका छैनन् । शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष संविधान निर्माण, राज्यको पुनसंरचना, सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणसहितको नयाँ नेपाल अब मृगमरिचिका सावित हुन थालेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । नेपाली जनताको परिवर्तनको चाहना अनुरुपको सङ्घीय गणतन्त्रको अग्रगामी स्वरुपको भ्रुण अझै रोपिन सकेको छैन । एकपटक एक युगमा आएको ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न कतै नेपालको सङ्क्रमणकालीन राजनीति व्यवस्थापन चुक्ने त होइन ? भन्ने प्रश्नले हामी सबैलाई लखेटिरहेको छ । ऐतिहासिक परिवर्तनको सङ्घारमा रहेको मुलुकले अहिले ‘स्टेटम्यानशीप’ भएका राजनेताहरुको खाँचो महसूस गरेको छ । अहिले नेतृत्व वर्गमा राजनीतिक एवम् व्यवस्थापकीय अक्षमताको लक्षण देखापर्न थालेको छ । सबै राजनीतिक पार्टीमा आन्तरिक द्वन्द्वको भुमरीमा फस्न पुगेका छन् । पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पूर्णत असफल सावित भएका छन् ।
यस्ता राजनीतिक पार्टीहरुबाट मुलुकको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिक व्यवस्थापन हुन सक्ला ? ठूलो शङ्का उब्जेको छ । नेपालको भावी राजनीतिक दिशा नै अन्यौलमा फस्न पुगेको छ । तथापि चुनौतीहरुको बीचमा पनि हाम्रा अगाडि रहेका अवसर र सम्भावनालाई भने नकार्न सकिँदैन । नेपाली जनताको चाहना अनुरुपको अग्रगामी स्वरुपको नयाँ नेपाल निर्माण सुनिश्चित गर्न शान्ति प्रक्रिया, संविधान र सोसँग जोडिएका अन्तर्वस्तुहरु जस्तोः राज्यको शासकीय स्वरुप तथा पुनसंरचना एवम् सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि आवश्यक समावेशी तथा स्वाधीन अर्थ प्रणालीको ढाँचा न्यूनतम रुपमा निर्धारण गर्नु आवश्यक छ ।
यसो गर्न सकिएको खण्डमा राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका हिसाबले नेपाल एउटा चमत्कारी राष्ट्रका रुपमा विश्व समुदायमा चिनिने अवसर पनि त्यत्तिकै छ । तर, यसका लागि राजनीतिक नेतृत्व कौशल तथा व्यवस्थापकीय क्षमताको आवश्यकता छ । राष्ट्रले अहिले यस्तै व्यवस्थापकीय नेतृत्वको माग गरेको छ जसले यति ठूलो ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै मुलुकलाई अग्रगमन तर्फडोर्याओस् । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको इतिहासले पनि यस तथ्यलाई पुष्टि गरिसकेको छ कि नेतृत्व कौशल र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभावमा इतिहासको महङ्खवपूर्ण कालखण्डमा हुने राम्रा परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन । पटकपटक नेपाली जनताले पाएको धोकाबाट यसपटक भने पाठ सिक्नुपर्छ, राजनैतिक नेतृत्वले । होइन भने, चरम सङ्क्रमणको भुमरीमा अल्झिएको राजनीतिक व्यवस्थापनको दुश्चक्रलाई अब नेपाली जनताले सदाका लागि तोड्न आफ्नो बाटो तय गर्नैपर्ने हुन्छ ।